MIRA: Nyika makumi masere dzinosanganisira UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba pasina chinyorwa chekufamba!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » MIRA: Nyika makumi masere dzinosanganisira UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba pasina chinyorwa chekufamba!
Aruba Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Eswatini Breaking News • France Kuputsa Nhau • French Polynesia Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Iceland Breaking News • Israel Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Usaende kuAruba, Eswatini, France, Iceland, Israel neThailand
Sekureva kweCDC, nyika dzakatemwa se "COVID-19 yakanyanya njodzi" dzave nemhosva dzinopfuura mazana mashanu pavanhu zviuru zana mumazuva makumi maviri nemasere apfuura. Vagari vemuUS havafanirwe kuenda kune idzi nyika, kunze kwekunge vabaiwa zvakakwana. Nhasi dzimwe nyika nomwe dzakawedzerwa kune urwu runyorwa.
Rondedzero ye makumi masere nyika dzine njodzi yekufamba kuenda panguva ino zvinoenderana neCDC
Vanhu vekuAmerica vanoyambirwa nezvenjodzi dzekufamba pakushanya kuFrance, Israel, Thailand, Aruba, Iceland neEswatini.
CDC inogadziridza rondedzero yenzvimbo dzine njodzi huru, ichiwedzera 7 inofarirwa nzvimbo dzekushanya uye dzekushanya kune "dzivisa kufamba" rondedzero yechikamu 4. (yakanyanya kutyisidzira).
Hurumende yeUS inokurudzira chete kuti vanhu vekuAmerican chete vakabaiwa nhomba ndivo vanofanirwa kuenda kuFrance, Israel, Thailand, Aruba, Iceland neEswatini
The Nzvimbo dzeUS dzekuDzivirira nekudzivirira Denda (CDC) nhasi yazivisa kuwedzerwa kwedzimwe nyika nomwe kune yayo 'Chikamu che4' runyorwa rwematunhu ayo anopa kutyisidzira kukuru kwecoronavirus kuvashanyi.
Mukutungamira kwayo, CDC inokurudzira kudzivirira zvachose kufamba kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa sekuti, "Chikamu 4: COVID-19 yakakwira kwazvo," kunyangwe kune vafambi vakazara-vakabaiwa.
Sekureva kweCDC, nyika dzakatemwa se "COVID-19 yakanyanya njodzi" dzave nemhosva dzinopfuura mazana mashanu pavanhu zviuru zana mumazuva makumi maviri nemasere apfuura.
Nyika nomwe dzichangowedzerwa ku CDC "Chikamu 4: COVID-19 yakakwira kwazvo" runyorwa kubva muna Nyamavhuvhu 9, 2021, ndeaya:
Mutongi weUS akataura zvakare kuti chero maAmerican anofanirwa kuenda kunzvimbo idzi anofanirwa kubaiwa zvakakwana.
“Vafambi vakabaiwa majekiseni zvakakwana kashoma kuti vawane nekuparadzira COVID-19. "Zvisinei, kuenda kune dzimwe nyika kune dzimwe njodzi, uye kunyange vafambi vakazara vanogona kuve panjodzi yekuwana uye nekuparadzira dzimwe COVID-19," akadaro CDC mukutungamira kwayo.
Vhiki rapera CDC yakawedzera nyika gumi neshanu kune "yakanyanya kukwirira" chikamu chengozi. Sangano rinogaro gadziridza rondedzero yezviziviso zvekufamba kubva paNhanho 16 ("yakaderera") kuenda paNhanho 1 ("zvakanyanya kwazvo").
Parizvino, CDC inoyambira maAmerican Citizens kuti vaende kune dzinotevera nyika nematunhu. Zvinoshamisa kuti zvinosanganisira iyo US Virgin Islands, ayo ari chikamu cheUnited States.
Dzivisa kufamba kuenda kunzvimbo idzi. Kana iwe uchifanira kuenda kunzvimbo idzi, ita shuwa kuti iwe wakabaiwa zvakakwana usati wafamba.
Iri izere runyorwa rwakakwana rweChikamu 4 nyika zvinoenderana neCentre of Disease Control muUnited States.
Usatambe kuenda ku80 nyika dzakanyorwa:
Dhemokiratiki Ripabhuriki yeKongo
Morten Litthau Jensen anoti:
Nyamavhuvhu 11, 2021 pa21: 02
Dzimwe dzenyika dzausingakwanise kuenda kwadziri
Kunze kwekunge vabaiwa zvizere dzimwe dzenyika dzakabaiwa zvakanyanya pasi rose.
Dr Basava anoti:
Nyamavhuvhu 10, 2021 pa20: 32
Ko Russia neUkraine?
Zvakanaka here nekubaiwa zvakakwana jekiseni?